Illaa 33 qof oo lagu eedeeyay inay ku fashilmeen caawinta dalxiisayaasha xilligii weerarka - Worldnews.com
Illaa 33 qof oo lagu eedeeyay inay ku fashilmeen caawinta dalxiisayaasha xilligii weerarka
Ilaalidii hoteelka iyo dad kale ayaa wajahaya eedo la xiriira inay ku guuldareysteen inay caawiyaan dalxiishayaashii ku sugnaa hoteelka Sousse oo la weeraray 2015-kii, sida xubno ka mid ah dowladda ay sheegeen.
Weerarkaasi ayaa sababay dhimasho aad u badan. Dalxiisayaal ayaa u badnaa dadka la dilay.
"mid aan agaasineyn aadna u argagax badneyd"
Dibad baxyo ka dhacay dalka Tunisia
Booliiska dalka Tunisia ayaa isticmaalay suntan dadka ka ilmaysiisa si ay u kala cayriyaan dibadbaxayaal ka cabanaya qiimaha maciishada iyo tilaabooyiin lagu xoojinayo...
Masaajid ku yaalla Malaysia oo dalxiisayaasha laga mamnuucay
Masaajid ku yaalla Malaysia oo dalxiisayaasha laga mamnuucay iney booqdaan kaddib marki ay laba haween ah oo loo maleeyey iney ajnabi yihiin ay muuqaal iska duubeen oo ay...
Dalxiisayaal u dhashay Jarmalka oo lagu dilay Masar
Labo haween dalxiisayaal ahaa oo dalka Jarmalka u dhashay ayaa toorrey lagu dilay hoteel ku yaalla xeebta Hurghada, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Ugu yaraan afar...
35 qof ayaa ku dhintay doon ku dagtay xeebaha Tunisia
Ugu yaraan 35 qof oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay doon ay saarnaayeen oo ku dagtay xeebaha bariga Tunisia,Warkani waxaa xaqiijisay dowladda Tunisia, lixdan iyo todobo...
Coutinho oo illaa January ka maqnaan doono Liverpool
Ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool, Philippe Coutinho ayaa baaritaan caafimaad maray ka dib markii dhaawac uu ka gaaray canqowga. Ka dib baaritaankaasi...
Weerarkii Hoteel Naasa Hablood oo la soo afjaray
Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa aroornimadii maanta soo afjaray weerarkii hoteelka Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho oo dabley hubeysan ay shalay gudaha u galeen....
BBC News 2017-10-29
Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa aroornimadii maanta soo afjaray weerarkii hoteelka Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho oo dabley hubeysan ay shalay gudaha u galeen. Weerarkaa ayaa ku billowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday hoteelka oo ku yaal inta u dhaxaysa Ex-Baarlamaan iyo Tiyaatarka, ka hor inta hoteelka aysan gudaha u gelin koox hubaysan....
Tuniisiya: tirada muhaajiriintii ay doontu la dagtay oo korortay
Hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee loo soo gaabiyo (IOM) ayaa sheegaysa in tirada dhimashada muhaajiriintii doontu kula dagtay xeebaha dalka Tunisia maalintii sabtida ahayd ay korortay ayna ku dhinteen ugu yaraan 112 qof. Maalintii axadda, ayaa waxaa la sheegay in dad gaaraya 50 qof ay dhinteen kadib markii doonidii ay saarnaayeen ay la dagtay. Sideetan iyo lix kale - oo...
Turkiga oo sheegay inuu aqoonsaday ninkii weeraray Istanbul
Maamulka dalka Turkiga ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in ay garteen ninkii weeraray kalaabka Istanbul. Ninkaasi ayaa dilay 39 qof oo u dabaaldegayay sanadka cusub. Maamulka ayaa u maleynaaya inuu ka yimi mid ka mid ah dalalka bartamaha Aasiya, oo ay wehliyeen xaaskiisa iyo laba cunug. Wuxuuna Turkiga galay bishii November ee sanadkii dhammaaday. Qoyskiisa ayaa la sheegayaa...
Weerar lagu laayey ciidamo katirsan laamaha ammaanka Tunisia
Ugu yaraan lix xubnood oo katirsan laamaha ammaanka dalka Tunisia ayaa lagu dilay weerar ay kooxo mintidiin ah kasoo qaadeen Waqooyi-bari dalkaas oo ah soohdinta uu la wadaago dalka Algeria. Wasaaradda arrimaha gudaha Tunisia ayaa weerarka ku tilmaantay in uu ahaa mid argagixiso. Laamaha amaanka iyo kuwa gaashaandhigga dalkaas ayaa si goos goos ah ula kulmayey weeraro dhiig...
Dalalka ay ka soo jeedaan dadka ugu dhaadheer caalamka
Cilmi baaris cusub ayaa muujineysa in ragga dunida ugu hdaadheer ay ka soo jeedaan dalka Holland. Dhanka dumarka ugu dhaahdeer dunida waxay ku nool yihiin Latvia, sida baaritaanka lagu sheegay. Sidoo kale, dumarka dunida ugu gagaaban waxay u dhasheen dalka Guatemala, ragga ugu gaabanna waxay ka soo...